Qarax geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qarax geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Qarax geystay dhimasho iyo dhaawac ayaa saakay aroortii ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaas oo lala eegtay gaari uu leeyahay taliyaha hoggaanka caafimaadka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cali Xirsi Barre (Cali Gaab).
Qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah ayaa sida la sheegay ku geeriyooday 1 askari oo lagu magacaabo Xamza Xasan Axmed Mooge, iyadoona 3 kale ay ku dhaawacantay.
Jeneraal Cali Gaab oo qaraxa kadib la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in xilliga gaarigiisa qaraxa lala eegtay uusan la socon, balse uu kaga soo haray goobtiisa shaqo.
Wuxuu sheegay in ciidanka waxyeeladda kasoo gaartay qaraxaasi ay ahaayeen illaaladiisa, oo xilligaasi doonayay inay soo qaadaan sarkaal kale balse la qarxiyay.
“Markii aan saakay shaqada soo aaday oo gaarigeygii uu i geeyay goobtii shaqada, wuu iga soo laabtay, waxuuna doonaayay sarkaal kale, balse marka uu marayo kasoo horjeedka wakaaladii biyaha, ayuu haleelay qaraxa oo la dhigay wadada dhinaceeda” Sidaasi waxaa yiri Taliye Cali Gaab.
Ugu dambeyn, Jeneraal Cali Gaab ayaa sheegay inuu caafimaad qabo, islamarkaana uu aad uga xun yahay dhibaatada gaartay illaaladiisa.
Dhinaca kale, goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya, iyagoo gebi ahaan xiray goobtaasi, balse markii dambe dib u furay.
Illaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ay uga hadlayaan qaraxaas geystay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho.